आशा जगाउँदै सेयर बजार, कारोबार र नेप्से परिसुचक दुबै उकालो « Bizkhabar Online
आशा जगाउँदै सेयर बजार, कारोबार र नेप्से परिसुचक दुबै उकालो
9 January, 2018 3:32 pm
काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन पनि नेप्से परिसुचक उकालो लागेको छ । बजार खुलेदेखि नै बढ्न शुरु गरेको नेप्से परिसुचक अन्तमा १२ दशमलव २७ अंकले बढेको छ । मंगलबार नेप्से परिसुचक १ हजार ४ सय १६ अंकमा पुगेर अडिएको छ ।
बजारमा नेप्से परिसुचक र कारोबार रकम दुबै ओरालो लगेका छन् । दैनिक कारोबार ३५ करोड रुपैयाँभन्दा तल झरेको बजारमा मंगलबार ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
मंगलबार उत्पादनमुलक बाहेक सबै समुहका परिसुचक उकालो लागेका छन् । बजारमा सबैभन्दा प्रभाव रहेको बैंकिङ समुहको परिसुचक १२ दशमलव ९६ अंकले बढ्दा समग्र नेप्से परिसुचकमा दोहोरा अंकको बृद्धि देखिएको छ । बजारमा होटल बैंक, बीमा तथा उत्पादनमुलक समुहको परिसुचकको बृद्धि उत्साहजनक देखिएको छ ।
बजारमा दिनभर १ सय ५८ कम्पनीको ९लाख १५ हनार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँको कारोबार हुँदा दोस्रोमा सानिमा माई हाइड्रोको साढे ५ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
नाडाको अध्यक्षमा करण चौधरीको उम्मेदवारी घोषणा, यस्ता छन एजेण्डा
काठमाडौं । सीजी होल्डिङ्स तथा सिजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशनको आगामी
टोकला मसला चिया अब नयाँ प्याकमा, मानव स्वास्थ्यका लागि लाभदायी
काठमाडौं । नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले बजारमा नयाँ आकर्षक प्याकमा टोकला मसला चियाको बिक्री
मञ्जुश्री फाईनान्सले साढे १२ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने, कहिलेसम्म दिन सकिन्छ आवेदन ?
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाईनान्स लिमिटेडले संस्थापक समूहअन्तरगतको १२ हजार ५८७ कित्ता शेयर बिक्री गर्ने भएको
ईभी नेपाल मोटर्सको शोरूम नक्सालमा, इलेक्ट्रिक स्कूटर र साइकल एकै ठाउँमा
काठमाडौं । ई. भी. नेपाल मोटोर्सको शोरूम काठमाडौं स्थित नक्सालमा संचालनमा आएको छ । यस